Madaxweynaha Barcelona oo shaaca ka qaaday sababta shaqada looga ceyriyay Ernesto Valverde – Gool FM
Madaxweynaha Barcelona oo shaaca ka qaaday sababta shaqada looga ceyriyay Ernesto Valverde
(Barcelona) 14 Jan 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sababta shaqada looga ceyriyay macalinkoodii hore ee Ernesto Valverde.
Barcelona ayaa maanta qabatay shir jaraa’id ay ku soo dhaweeyneyso macalinkeeda cusub ee Quique Setien, kaasoo kooxda maamuli doona ilaa iyo 2022, waxaana shirkan Jaraa’id qeyb ka ahaa Madaxweynaha kooxda ee Josep Maria Bartomeu.
Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in sababta ka dambeysa in shaqada laga ceyriyo Ernesto Valverde aysan la xiriirin natiijooyinka liita ee kooxda ilaa iyo xad, balse ay tahay arrin la xiriirta wax qabadka guud.
Sidoo kale Ernesto Valverde ayaa wuxuu xaqiijiyay in kooxda iyo ciyaartoyda ay u baahan yihiin jawi badelasho, si ay ugu ciyaaraan dhiirogalin cusub qeybta labaad ee xilli ciyaareedka.
Si kastaba ha noqotee, wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadaladii Ernesto Valverde uu ka sheegay shirka Jaraa’id waxaa ka mid ahaa:
“Waxaan ogeeyn mudo dheer in qaab ciyaareedka uusan fiicneyn, inkasta oo natiijooyinka horyaalka iyo Champions League ay fiicnaayeen”.
“Laakiin waxaan wada ognahay dhamaanteen in qaab ciyaareedka uusan fiicneyn, waxaan kala hadalnay Valverde dhowr jeer tan xagaagii, xiriir dhow ayaan la sameynay isaga, maalmihii dhowaana waan la hadalnay isaga, waxaana u sheegnay in arrimuhu ay hagaagayaan”.
“Waxaan jeclaan lahaa in arrimuhu ay noqdaan sidaan si ka duwan, waxaan la hadalnay tababarayaal kale waqti dheer kuwaasoo magacyadooda aan la shaacinin, laakiin ugu dambeyntii mid ka mid ah ayaa lagu dhawaaqay, wadahadalada waxay aheyd inay noqdaan kuwo qarsoodi ah, laakiin ma aysan aheyn”.
“Sannadkii hore, waxaa jiray sababo badan oo aan shaqada looga ceyrin Karin, mar walba waan aaminsanaa, waxaana u jeclaa shaqsi ahaan, waxaan ku celcelinayaa in usbuucyadii la soo dhaafay qaab ciyaareedka uusan fiicneyn, waxaan kala hadalnay arintaas, mana aheyn wax ku cusub isaga, Kadib waxaan go’aansanay inaan siinno ciyaartoyda dhiirogalin cusub ee ah in la badelo macalinka”.
RASMI: Isku aadka wareegga saddexaad ee Copa del Rey oo la shaaciyey… (Yey ku aadeen Kooxaha Barcelona, Real Madrid & Atletico?)
Kooxaha Mogadishu City Club iyo Elman oo barbaro ku kala baxay